AH: ရွှေဖြစ်အောင် ဖိုအထိုးကောင်းလို့ ထောင်ကျသွားတဲ့လူ
ပြဒါးသေ တစ်ဆွေဝ၊ သံသေ တစ်ပြည်ဝဆိုတဲ့ စကားပုံလေးကိုလည်းကြားဖူးကြမှာပါ။ ပုဂံပြည်ကြီးမှာ အရှင် ရှင်အဇ္ဇဂေါဏ က ပြဒါးဓာတ်လုံးထိုးတာ မအောင်လို့ စိတ်ပျက်ပြီး နောက်ဆုံး ချေးတွင်းထဲကို ပစ်ချလိုက်တော့မှ ဓာတ်အောင်ကာ ဓာတ်လုံးနဲ့တို့သမျှ ရွှေဖြစ်ပြီး ပုဂံပြည်ကြီးမှာ မုဆိုးမတောင် ဘုရားတည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ဆန်ဆန် လေးတွေကိုလည်း ကြားဖူးမှာပါ။
ခုတော့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံက အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိ ပေါလ်မော်ရန် ဆိုတဲ့ လူကတော့ သဋ္ဌေးဖြစ်မြန်အောင် သူ့ရဲ့ အီအီး(မစင်)တွေကို ရွှေဖြစ်အောင် ဖိုထိုးပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ရွှေရောင်အိပ်မက်ကြီးကတော့ အခု ပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့အခန်းမှာ သူ့ရဲ့ အီးတွေကို လျှပ်စစ်မီးဖိုကြီးနဲ့ ရွှေဖြစ်အောင်ထိုးနေတုန်း မီးထလောင်လို့ပါတဲ့။ အဲ့ဒီအတွက် သူ့အခန်းဟာ ဒေါ်လာ ၄၈၀၀ ဖိုးလောက် ပျက်စီးသွားခဲ့ရသလို အခြားသော လူတွေအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၃ လ ကျခံစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အပြစ်အပြင် ၁ နှစ်အထိ သူ့ကို စောင့်ကြည်နေဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တရားသူကြီးစီရင်ချက်ချရာမှာတော့ “အမောင်လုလင်၊ အသင်သည် ရွှေဖြစ်အောင် လူ့မစင်ကို ဖိုထိုး အဆိုပါ အကြံမျိုးကိုမှ ကြံရက်လှပေတယ်” လို့ဆိုသွားပါတယ်။ The Belfast Telegraph သတင်းစာအဆိုအရ တော့ ဒါဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အဂရိတ်ပညာဖြစ်ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆိုပါသတဲ့။
ပေါလ်ရဲ့ ရှေ့နေကတော့ သူ့တရားခံဟာ ထက်မြက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် မူးယစ်ဆေးဝါ ပြသနာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်သွားရတာပါလို့ လျှောက်လွှဲချက်ပေးပါသတဲ့။
သြော်… တော်လိုက်တဲ့ရှေ့နေ တစ်မှု့တရားစွဲလို့ မပြီးသေးဘူး နောက်တစ်မှု့ဆင့်အောင် အချွန်နဲ့ မတတ်ပေတယ်…
Link : (Link)
Posted by AH at 10/24/2011 10:17:00 PM
i don't like your last sentence . pls don't write this kind of rubbish.
AH October 24, 2011 at 10:57 PM
thanks for point out, removed the last sentence. :)
Min Khine October 24, 2011 at 11:16 PM
ဘာ....၉၀:၁၀ တဲ့လား။ ဒါတောင်သူပြန်တွက်ပြတော့ ၁၀၀ ကျော်နေသလိုပါပဲ။ ဟီး
Mrs. Bagel October 24, 2011 at 11:31 PM
tut tut :P
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 25, 2011 at 12:01 AM
အဲဒီနည်းလမ်းသိလို့ကတော့ ပါသမျှ အီးအီး စွန့်မပစ်ဘဲ စုထားရတော့ မလိုလို...
အင်း အခန်းနံစော်မှုနဲ့ စည်ပင်ကပါ လာပြီး တရားစွဲရင် ဒုက္ခ..
စားစရာမရှိ လျှော်စရာရှိ ဖြစ်နေပါဦးမယ်..
AH October 25, 2011 at 12:09 AM
ကိုမင်းခိုင် ရ မမြတ်ကြည်>> လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မချော >> ဟုတ်ပ တစ်အိမ်လုံး နံဟောင်နေမှာပဲနော်.... :P
မောင်ဘုန်း October 25, 2011 at 12:15 AM
အင်း .................. ကြံကြံဖန်ဖန် နော် ...
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် October 25, 2011 at 12:23 AM
Maung Myo October 25, 2011 at 9:17 AM
ရွံထားဗျာ ဒီလူ့နှယ် ကြံကြံဖန်ဖန် အွက် ။
မဒမ်ကိုး October 25, 2011 at 1:15 PM
ဟဟ အကြံတော့ရပြီ ကဲ ဘယ်နှယ့်လဲ ကိုအားထောင် စိတ်ဝင်စားရင်လာပူးပေါင်းနိုင်တယ် အကုန်ကျလဲနဲ
ချီးကန်ထရိုက်ဆွဲရအောင်လေ ဘိုလဲ စိတ်ဝင်စားလား ဟဲဟဲ .
မောင်နှမအချင်းချင်းမို့ တ၀က်ရှယ်တာနော ...
AH October 25, 2011 at 1:46 PM
သင့်မြတ်လျှော်ကန်လှတဲ့ အကြံပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေဖြစ်နည်းသင်ကြမယ်လေ ပြီးရင် လျှပ်စစ်မီးဖို အဲလေ ဖွဲမီးဖိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ အဲ့ဒါကြီး အရင်ဝယ်ကြမယ်လေ....
ရွှေဖြစ်လို့ကတော့ ဟေး ဟေး နောက်ဆို အိမ်သာတွေ အများကြီးဆောက်ပြီး အီးအီးလာပါတဲ့လူကို ပိုက်ဆံပါ ပြန်ပေးလိုက်ဦးမှာ......
mstint October 25, 2011 at 4:07 PM
ဟုတ်ပါ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ပွပေါက်ရှာပုံကလည်းနော်။
မြသွေးနီ October 25, 2011 at 4:55 PM
AH October 25, 2011 at 9:59 PM
ကိုမောင်ဘုန်း၊ ကိုမျိုး၊ အန်တီတင့်၊ မမြသွေးနီတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.... :)